Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): There is one last chance
at 1/15/2015 10:38:00 AM
There is one last chance.That is for the United States to communicate effectively. Right now, the assistant of Secretary of States is in Burma. They should be talking about this to the government. This is your last chance. other wise, when election happens, she not allow to beapresident and the constitution is not amended to remove the military strangle over the power; we are not going to consider those election to be legitimate exercise the democratic will of the Burmese people.That warning, we hope, we will tell the Burmese regime they need to get serious about this reform.
ဒါကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ ထိထိရောက်ရောက် ပြောဆိုဆက်ဆံနေပါတယ်၊ အမေရိကန် လက်ထောက်နိင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟာအခုမြန်မာပြည်မှာ မြန်မာအစိုးရကို ဒီဟာက နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်၊
စစ်တပ်ကအာဏာကို ဆုပ်ကိုင်ထားစေတဲ့ ဒီဖွဲ့ စည်းပုံကို မပြင် ခြင်း ဟာ လာမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖွဲ့ စည်းပုံအရ သံမတဖြစ်ဖို့ကန့် သတ်လိုက်တာဘဲ ဖြစ်တယ်၊
အမေရိကန်အနေနဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီဆန္ဒနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဘဲ လို့ စဉ်းစားရမှာဘဲ။
ဒီလျော်အောင်ဘာသာပြန်ထားတာပါ၊ ဒီ့ထက်ကောင်းအောင်ပြန်နိုင်ရင် ပြန်ပေးကြပါဦး
Ko Ko Lay.
Post by Voice Of Kachin.